NextMping | Ramangwana Rebasa | Cheryl Cran
Sei NextMping™ mabasa
Uchishandisa sosi dzakakosha kukubatsira kuti ufambe ramangwana rebasa - isu tinokubatsira iwe kuratidza kunze kunotevera kune kambani yako, vatungamiriri vako uye zvikwata zvako uye kuronga zvekuita kuti uve ramangwana rakagadzirira ikozvino.
Vatungamiriri vako vakagadzirira izvo zvinotevera? Vatungamiriri vako vane 'hunyanzvi hwenguva yemberi' kutungamira shanduko dzinodiwa kuti usvike ikoko? Tine mhinduro dzakabatanidzwa dzekubatsira vatungamiriri kuti vagadzirire ramangwana izvozvi.
Zvikwata zvako zvinogarika here uye zvine hunyanzvi? Tine zvishandiso zvekubatsira zvikwata zvako kuti zvive zvinonamira vatungamiriri vanochinja izvo zvinotevera izvo mune ramangwana.
Uri ramangwana rakagadzirira bhizinesi? Kunyangwe iwe uri bhizinesi rakasimbiswa kana kutanga isu tinokwanisa kukubatsira iwe kumepu zvinotevera.
Strategic masevhisi atinopa
Dzidza pane kudiwa uye munguva chaiyo.
Zvako paced vhidhiyo makosi ane sarudzo yekushanda neNextMping™ kochi.
Batsirai vatungamiriri vako uye zvikwata kuti zvigadzirire ramangwana ikozvino neazvino hunyanzvi uye maitiro.
Kufemerwa, kutsvagisa, mazano anoshanda uye kucheka zvemukati ndizvo zvaunowana kana iwe ukashanda naCheryl Cran senge mutauri wako wekutaurira chiitiko chako chaicho kana chiitiko cheupenyu. Yakagadzirirwa uye inofambidzana.
Nguva dzisina chokwadi inoda yakanyanya sosi yevatungamiriri uye zvikwata. Shanda neakagadziriswa Next Next yedu™ varairidzi kukwidziridza hunyanzvi hweutungamiri, kuwedzera maitiro ekufunga nekuvandudza kushanda kwevashandi vari kure.
Seye boutique yekubvunza kambani tinoshanda nemabhizimusi madiki kusvika pakati nevamuzvinabhizinesi kuzozivisa bhizinesi mune ramangwana
uye kuvaka mukana wekukwikwidza, kukunda mune yekure basa chaiko uye kuita shanduko kutungamira.
75% ye CEO's irikureva kushomeka kwevashandi vane hunyanzvi sepengo rakakura mukugadzirira ramangwana sesangano.
PaNeMMping™ isu tinopa dzakasiyana siyana dzekudzidzisa nzira uye nzira dzekubatsira kuvhara bhaji rejenari revatungamiriri vako uye zvikwata.
Tsvagiridzo yakawana kuti vatungamiriri pamwe nevamabhizinesi vanowana huchenjeri hwakawanda hwakajeka, mazano anoshanda
kana uchiita mapoka madiki evezera. Yedu yakasarudzika NextMping™ matiziro anoitwa nekushandisa chete.
Tarisa uone yedu yazvino mayererano
Maitiro ekugadzira uye kuvandudza kumhanya kwekuchinja
Iyo ramangwana rekubudirira kwebasa haritsamiri pane rimwe kana vaviri 'magamba' mune bhizinesi - iro ramangwana riri pamusoro 'isu' uye maitiro ekugadzira nekugadzira nekukurumidza mukuchinja.
Bhuka izvozvi pa50% kubviswa
Kukosha kwekushambadzira panguva yekutambudzika uye maitiro ekutambisa bhizinesi rako
Cheryl anokurukura naBrad Breininger, anowana mubatsiri uye anotungamira Strategist kuZync nezveramangwana rechiratidzo uye chitsva.
Maitiro Ekurerutsa Kushushikana Mune Iyo Yemahara Kubasa
Kana paine chinhu chimwe chete pane vashandi pfungwa - kunyanya vatungamiriri ndiyo nzira yekudzora kushushikana munzvimbo yakasanganiswa yebasa. Makambani mazhinji ari kuronga musana webasa revashandi vavo kutanga muna Gumiguru 2021. Iyo yemhando yemhando yezvirimwa yatiri kuona seinozivikanwa zvakanyanya pari zvino 'inoshanduka pabasa pabasa'. Izvo zvinochinjika […]
NextMapping ™ Blog - Verenga Zvimwe
94% yevatungamiriri epasi rese akaongororwa nde kusagutsikana nehunyanzvi hwavo hwekuita.
77% yevashandi vanoda vanhu kutanga - digital rwechipiri senzira yakakosha yekushandura bhizinesi mune ramangwana.
16% yemakambani anoti zvaari yakabudirira neshanduko yedhijitari miedzo.
70% yemakambani anoreva kuti usa uve netarenda rakagadzirira remangwana.
Vashoma vevatengi vatinoda kushanda navo